Lalàn’ny fifandraisana : diso fanantenana amin’ny HCC ny mpanao gazety ka miantso ny filoha | NewsMada
Lalàn’ny fifandraisana : diso fanantenana amin’ny HCC ny mpanao gazety ka miantso ny filoha
Hiala nenina. « Miantso ny filohan’ny Repoblika tsy mbola hampanan-kery ny lalàna mifehy ny fifandraisana, ary hamerina azy eny anivon’ny parlemanta mba handinihana azy indray, araka ny fahefana omen’ny lalàmpanorenana azy izahay”, hoy ny fanambaran’ny mpanao gazety, omaly tetsy Antsakaviro. Nohamafisin’izy ireo ny finiavana sy ny fahavononana handray anjara amin’ny resaka sy ny adihevitra rehetra ilaina amin’ny famerenana ny fandinihana io lalàna io.
Nahatsapa ny mpanao gazety fa diso fanantenana taorian’ny fanapahan-kevitry ny HCC nilaza fa mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana ny fehezan-dalàna mifehy ny serasera. Nametraka ahiahy koa izy ireo manoloana io lalàna io ary mihevitra fa manitsakitsaka ny zo sy ny fahalalahana fototra maneho hevitra sy mahazo vaovao, ary manohintohina ny asa fanaovan-gazety io lalàna mifehy ny serasera io. Nalahelo koa anefa ny mpanao gazety. « Tsy nohainoana ny antso nataon’ny ankolafin-kery maro mba hamerenana indray ny fifampiresahana handinihana iny lalàna iny. Anisan’ny nanao izany antso izany ohatra ny Hetsika ho amin’ny fahalalahana maneho hevitra, ny vondron’ireo orinasa mpamoaka vaovao, ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, ny fiarahamonim-pirenena ary ny fianakaviambe iraisam-pirenena », hoy ihany izy ireo.
Tsy mbola kivy ny mpanao gazety…
Notsiahivin’izy ireo ny nambaran’ny filoham-pirenena, ny 14 jolay teo, naneho fahavononana hamaha olana nefa tsy tanteraka izany.
Na izany aza, tsy mbola kivy ny mpanao gazety satria tsy mbola tonga any amin’ny dingana farany mampanan-kery azy ilay fehezan-dalàna mifehy ny fifandraisana. « Manantena izahay fa manaja ny soatoavina demokratika sy manaiky ny foto-pisainana mifototra amin’ny fahalalahana ny tompon’andraikitra eto amin’ny firenena », hoy izy ireo. Antony nanaovan’ny mpanao gazety antso avo amin’ny filoha Rajaonarimampianina izany amin’ny maha tompon’ny teny farany azy.
Andrasana ny ho valin-tenin’ny mpitondra satria tsy mbola tara izao.